Home / Blog / Fianakaviana sinoa, tena tsy mendrika fisarahana fahatelo?
2020 / 10 / 17 FisokajianaBlog 977 0
Whenever I talk about Japan with my friends, I can’t get rid of one topic: kabine.
Na izany aza, ny tena manaitra ahy indrindra amin'ny trano fidiovana Japoney tsy ilay endrika madio sy hadio ary tsy misy dikany, fa ny fomba fampiasana ny trano fidiovana.
Tian'ilay Japoney ny mandro, ka na lehibe na kely ny fandroana, dia fanao mahazatra ny koveta fandroana amin'ny trano rehetra.
We have introduced the three separations before, and the reason why we are mentioning the three separations again today is because we found that there are a lot of people who don’t understand inona ireo fisarahana telo ireo, ary manaraka fironana fotsiny izy ireo noho ny fisarahana telo, nefa tsy mandinika tsara hoe inona no ilainy na tsia.
So today we’re going to have a good chat about inona marina ny fisarahana telo, ary ilaina ny fisarahana telo na tsia.
Inona marina ireo fisarahana telo?
Voalohany indrindra, mila manazava ny hevitry ny fisarahana telo isika, tsy midika akory izany hoe manampy varavarana fitaratra na ridao fandroana amin'ny fandroana na dia misaraka aza izy io.
The real three separations means that the washroom, toilet and shower partitions do not overlap each other’s space and can be used by three people at the same time. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fisarahana telo dia efitrano mahaleo tena telo, hizara ny fiasan'ny fandroana, tsy miankina amin'izy samy izy, tsy misy fanelingelenana.
Ny fisarahana faharoa dia ny faharoa tsara indrindra, ny trano fidiovana dia mizara ho faritra mahaleo tena roa, olona roa no mampiasa ny fandroana amin'ny fotoana iray.
Raha ampitahaina amin'ny efitra fandroana mifangaro, fisarahana roa ary fisarahana telo dia afaka manatratra ny fisarahana ny lena sy maina, izay manatsara be ny fampiononana amin'ny fampiasana ny trano fidiovana.
Raha oharina amin'ny fisarahana roa, ny fandroana fisarahana telo dia mahaleo tena tanteraka, ny fisarahan'ny mando sy maina hahatratrarana tsara kokoa, ary miaraka amin'izay dia afaka manamaivana kokoa ny fianakaviana amin'ny fampiasana fifanoherana sy tsindry, manatsara be ny fahombiazan'ny fampiasana ny trano fidiovana.
Alao an-tsaina ny fianakaviana iray manan-janaka telo. Amin'ny alina, raha mbola mandro i Neny dia afaka mandeha any an-trano fidiovana i dada ary afaka misasa miaraka amin'ny ankizy ny ankizy. Raha lehibe kokoa ny mponina, miaraka amin'ny taranaka telo ao anatin'ny tokantrano iray, dia miharihary kokoa ny tombony azo amin'ny fisarahana telo.
Izany irery ve no tombony azo amin'ny fisarahan'ny taranaka telo?
Ny teboka manan-danja indrindra dia that it’s not just a need for all Chinese families.
Rehefa dinihina tokoa, ny zavatra malaza indrindra nananantsika dia ny singana iray
Noho izany, ny fiheverantsika ny fisarahana telo dia tokony heverina fa tsy amin'ny fomba fijery psikolojika, fa amin'ny fomba azo ampiharina.
Ho an'ny trano tena mila fisarahana telo, voalohany ny mponina ao an-trano dia tokony ho 3 na mihoatra, raha tsy izany tsy ilaina izany.
Faharoa, ny trano dia manana ary manana trano fandroana iray ihany. Raha manana trano fidiovana roa ny fianakaviana, raha samy manavaka roa izy roa, dia efa afaka mifanaraka amin'ny fampiasana azy isan'andro koa.
Ny zavatra farany tokony hodinihina dia hoe ny mpianakavy zatra mandro. Ny fandroana dia haharitra kokoa noho ny fandroana, ary ny fandroana dia ao amin'ny habaka iray izay tsy azon'ny olona iray ampiasaina irery. Noho izany dia ilaina ny manasaraka ny kovetabe fandroana ho an'ny ankohonana marobe mandro miala sasatra, izay no antony itiavan'ny vahoaka japoney mandro.
Ho fanampin'ny zava-misy fa ny fomba azo ampiharina dia samy hafa amin'ny fianakaviana iray sy amin'ny iray hafa, misy olana hafa ihany koa ho an'ireo fianakaviana sinoa: sarotra ny mahatsapa ny fisarahana telo.
Ny antony dia mitaky be ny haben'ny trano sy ny bikan'ny trano.
Mba hahatratrarana ireo fisarahana telo ireo dia tsy tokony ho kely loatra ny trano fidiovana, ary avo kokoa aza ny fepetra takiana amin'ny haben'ny tokatrano.
Ny endrika fandroana mahazatra dia ny: strip mitsangana, strip mitsivalana ary toradroa.
Ny efitrano fandroana lava ihany no mety hahatratra ny fisarahana telo, mizara tsara indrindra ny habaka, manampy fotsiny partition afaka.
The kianja ny trano fandroana kosa dia mitaky faritra iray farafahakeliny 4.6 metatra toradroa, according to Ms. Walkie’s estimate.
Loharano: kaontenera ho an'ny daholobe
Raha te hampiasa azy io amin'ny fomba tsara ianao, ilay faritra tokony ho 6 metatra toradroa.
Ny fomba fisarahana telo heny mahazatra an'ny efamira
As for the slim toilet …… is unlikely to be able to achieve this, because to get to the innermost shower area, one would have to pass through the toilet (ny tsipika mavitrika dia tokony ho ③ → ② → ①). Raha io no tratra dia mila esorina ny rindrina.
Fisarahana telo na fisarahana roa
Ny mazava dia ny singa iray dia tsy maintsy atao, ka ny safidy atrehinay dia na hanana fisarahana telo na fisarahana roa.
Ankehitriny ny fomba fisarahana telo ao amin'ny trano fandroana dia tena mafana tokoa, ary izaho manokana dia mpisolovava fisarahana telo, satria samy manana ny tombony azo avy aminy ny fampiononana sy ny fahombiazan'ny fampiasana.
Fa ny voasary dia teraka any Huainan dia volomboasary, teraka tao Huabei dia Hovenia, amin'ny farany na fisarahana telo, na hijerena raha tsy afaka amin'ny farany arakaraka ny toe-javatra misy eo an-toerana, ary tena manatsara ny fahasambaran'ny index velona manokana.
Ohatra, tato ho ato, ny mpiara-miasa iray izay sahirana amin'ny fanaingoana dia nahazo sary roa, ny famolavolana ny fandroana dia roa misaraka ary telo misaraka.
Drafitra famolavolana telo-fisarahana
Ny fisarahana telo-fisarahana dia eo amin'ny lafiny toradroa, fa ny efitra fandroana tany am-boalohany dia ambany, noho izany dia mila mindrana toerana kely amin'ny efitrano mifanila aminy ianao.
Ny tetika famolavolana roa-fisarahana
Ny famolavolana roa-misaraka no endrika mahazatra indrindra, miaraka amina milentika irery. Ireo endrika roa ireo dia tsy tsara na ratsy tanteraka, ary samy mety amin'ny resaka fampiasana habaka.
Ny fisarahana telo-lalana dia manana ny tombony manokana ary mety kokoa noho ny fisarahana roa-lalana ho an'ny fianakaviana lehibe iray. Na izany aza, ny fisarahana faharoa dia mitaky toerana kely kokoa ary mety kokoa amin'ny fianakaviana kely kokoa.
Ny safidy eo amin'ny fisarahana telo na fisarahana roa dia tokony hiankina amin'ny zavatra ilainao manokana fa tsy ny fanarahana ilay antsoina hoe lamaody.
Ny namana iray nianatra tany Japon dia nanofa trano 38 metatra toradroa irery, miaraka amin'ny efitra fandroana telo misaraka telo, fantsakana eo afovoany, fandroana + fandroana eo ankavia ary trano fidiovana ankavanana.
Satria feno hipoka ny faritra telo rehetra, matetika izy no mamoha ny varavarana amin'ny trano fidiovana ary mampifandray azy amin'ny vata, izay mamadika azy ho faritra faharoa.
Na izany aza, havana iray hafa izay nifindra trano vao tsy ela akory izay, amin'ny maha-fianakaviana azy dimy, dia nanondro ny mpamorona talohan'ny fanavaozana fa mila trano fidiovana telo misaraka izy.
Na izany aza, 4 metatra toradroa fotsiny ny velaran'ny trano fidiovana tany am-boalohany, ka nindrana indroa metatra toradroa avy tao amin'ilay efitrano fatoriana mifanila amiko aho hanitarana ny faritry ny fidiovana.
Amin'ireto ohatra roa ireto dia ny fampisehoana aminao fa ny valiny mety na tsy mety ny safidin'ny fisarahana telo na fisarahana roa dia ianao irery ihany no mahalala.
Sary natolotry ny pinterest
Previous :: Ny toro-hevitra fandroana tsara indrindra amin'ny efitra fandroana rehetra, amin'ny toerana iray ihany!
Kohler dia mandray orinasan-trano fandroana marani-tsaina fanta-daza hanenjehana mihoatra ny $ 1.4 ...
Manan-tsaina, tsy mifandray, Crossover mandeha amin'ny ankapobeny! Fandroana marika vaovao avy any ivelany ...